Vaovao - lozika famatsiam-bola roa amin'ny angovo hidrôzenina: sela sy fitaovana fototra
Ny sandan'ny kalon'ny hidrôzenina dia avo telo heny noho ny lasantsy ary 4,5 heny noho ny coke. Aorian'ny fanehoan-kevitra simika dia rano tsy misy loto maloto ihany no vokarina. Ny angovo hidrôzenina dia angovo faharoa, izay mila mihinana angovo voalohany hamokatra hidrôzenina. Ny fomba lehibe ahazoana hidrôzenina dia ny famokarana hidrogen avy amin'ny angovo fôsily sy ny famokarana hidrôzenina avy amin'ny angovo azo havaozina
Amin'izao fotoana izao, ny famokarana hidrôzenina ao an-toerana dia miankina amin'ny angovo fôsily, ary ny haben'ny famokarana hidrôzenina avy amin'ny rano electrolytic dia voafetra tokoa. Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia fitehirizana ny hidrôzenina sy ny fihenan'ny vidin'ny fananganana, ny haben'ny famokarana hidrôzenina avy amin'ny angovo azo havaozina toy ny rivotra sy ny hazavana dia ho lehibe sy lehibe kokoa amin'ny ho avy, ary ny firafitry ny angovo hidrôzenina any Shina dia hadio sy hadio kokoa.
Amin'ny ankapobeny, ny fantsom-bokatra solika sy ny fitaovana ilaina dia mametra ny fivelaran'ny angovo hidrôzenina any Shina. Raha ampitahaina amin'ny ambaratonga avo lenta, ny hakitroky ny herinaratra, ny herin'ny rafitra ary ny fiainam-panompoana ny firaketana an-trano dia mbola taraiky ao aoriana; Ny membrane fifanakalozana proton, ny catalyst, ny electrode membrane ary ny fitaovana ilaina hafa, ary koa ny compresseur ny rivotra avo lenta, ny paompy mivezivezy hydrogen ary ny fitaovana ilaina hafa dia miankina amin'ny fanafarana, ary avo ny vidin'ny vokatra
Noho izany dia mila mijery ny fahombiazan'ny fitaovana fototra sy ny haitao fototra i Sina mba hanonerana ireo lesoka
Teknolojia lehibe an'ny rafitra fitehirizana angovo hidrôzenina
Ny rafi-pitehirizana angovo hidrogen dia afaka mampiasa ny angovo herinaratra mihoatra ny angovo vaovao hamokarana hidrogen, hitahiry azy na hampiasana azy amin'ny indostria any ambanin'ny tany; Rehefa mitombo ny enta-mavesatry ny rafitra herinaratra, ny angovo hidrôzenina voatahiry dia azo ateraka amin'ny alàlan'ny sela solika ary averina any amin'ny tambajotra, ary madio sy mahomby ary malefaka ny fizotrany. Amin'izao fotoana izao, ny haitao manan-danja amin'ny rafi-pitehirizana angovo hidrôzenina dia ahitana indrindra ny famokarana hidrôzenina, fitehirizana hidrôzenina sy fitaterana ary ny haitao selan'ny solika.
Amin'ny taona 2030 dia antenaina hahatratra 2 tapitrisa ny isan'ireo fiara mpitondra solika ao Shina.
Ny fampiasana angovo azo havaozina mba hiteraka "hidrôniôma maintso" dia afaka manome ny angovo hidrôzenina amin'ny fiara mpamokatra solika hidrôzenina, izay tsy vitan'ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny angovo azo havaozina sy ny rafitra fitehirizana angovo hidrôzenina, fa mahatsapa ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana maitso sy ny famoahana aotra ny fiara.
Amin'ny alàlan'ny lamina sy ny fivelaran'ny fitaterana angovo hidrôzenina, ampiroborobo ny toerana misy ny akora fototra sy ny singa fototra amin'ny sela solika, ary hampiroborobo ny fampandrosoana haingana ny rojom-bidin'ny angovo hidrôzenina.